2000 Group ( B –7) သဝဏ်လွှာ (၃၉) by May Aye Oo | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » 2000 Group ( B –7) သဝဏ်လွှာ (၃၉) by May Aye Oo
2000 Group ( B –7) သဝဏ်လွှာ (၃၉) by May Aye Oo
Posted by Swal Taw Ywet on Apr 9, 2012 in Community & Society, Events/Fundraise, Myanmar Gazette |3comments
သဝဏ်လွှာ (၃၉) by May Aye Oo on Wednesday, March 14, 2012 at 8:43am ·
“သနားခြင်းဟူသည်မှာ အလွယ်ကူဆုံး အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး တာဝန်ယုူခြင်းဟူသည်ကား အလွန်ခက်ခဲသော အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။”
~ ဘဝအိပ်မက် ပန်းအိပ်မက် / မစန္ဒာ ~
History / Preparation period for the —
အခမဲ့ဆေးခန်း နှင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း
၂၄ – ၂ရ မတ်လ၊ ၂၀၁၂
၂၀၁၁ အကုန်၊ ၂၀၁၂ အဆန်းလောက်က ကျမ ကျောက်ကွင်းရွာ တရားပွဲ သွားခဲ့တုံးက ဘိတ် (မြိတ်) သား၊ ဘိတ်သူ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက် နဲ့ သိကြွမ်းခဲ့ပါတယ်..။ သူတို့တည်းတဲ့အိမ်က ကလေးမလေးက ကျမတို့ သင်တန်း (ဒီဇင်ဘာလ-၂၀၁၁) ကျောက်ကွင်း မှာ ဖွင့်ခဲ့တုံးက ဆုရခဲ့တဲ့ကလေးပါ..။ အဲဒီကလေးကို ဘာတွေသင်ရလဲ… မေးရင်း..နဲ့ ကျမတို့သင်တန်းကို အရမ်းစိတ်ဝင်စား သွားပြီး.. မြိတ်မှာ သင်တန်းလာဖွင့်ပေးဖို့ တောင်းပါတယ်..။ မြိတ်မြို့ရဲ့ အစွန် တိုးချဲ့ရပ်ကွက်ကလေး က မူလွန်ကျောင်းကလေးမှာ ဖွင့်ပေးစေချင်တာပါ.. တဲ့..။
ကျမက “မြိတ်မှာတော့ ဖွင့်ပေးချင်ပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့စဉ်းစားအုံးမယ်.”. လို့ ပြန်ပြောတော့..၊ “ဘာဖြစ်လို့လဲ.. ခင်ဗျာ..” တဲ့ ..။ “ဘာမှတော့ မဖြစ်ပါဘူး..။ ဒါပေမဲ့ မြိတ်ကို သဘောင်္နဲ့သွားရင်လဲ ခရီးဖင့်မှာ..၊ ခွင့်ရက်ရဖို့ခက်မယ်..။ ကားနဲ့လာရင် အဆင်ပြေမလား..” ဆိုတော့..၊ “ဆရာမတို့ လေယာဉ် နဲ့ လာပါ…” တဲ့..။ ကျမက “ဒါကြောင့်စဉ်းစားမယ်.. ပြောတာပေါ့..။ ကျမတို့ အဖွဲ့က မချမ်းသာပါဘူး..။ ခရီးစရိတ်အများကြီးကုန်ဖို့ မတတ်နိုင်ပါဘူး..” ဆိုတော့..၊ “ဆရာမ ရယ်.. ကြိုးစားပေးပါ..” တဲ့..။ “ကလေးတွေကို အဲလို တတ်စေချင်လို့ ပါ..” တဲ့..။
ဒါနဲ့ ကျမလဲ ..အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားပြီး ရက်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ မြိတ်မှာ ကျမတို့ သင်တန်း တစ်ခါမှ မဖွင့်ဖူးသေးတာမို့ ဖွင့်ပေးချင်ပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ အနဲဆုံး ကျမတို့ က ၅ ယောက်၊ ၆ယောက်တော့ သွားမှာမို့ ခရီးစရိတ်က တော်တော်ထိမှာပါ..။ သူတို့ဘက်က “ကလေးတွေ ထမင်းကျွေးတာ နဲ့ နိဗ္ဗာန်ဈေးကို တာဝန်ယူပေးပါ့မယ်..။ ဆရာမတို့ ဖြစ်အောင်လာပါ..” လို့ အတန်တန်ပြောသွားလေရဲ့..။
အဲဒီတော့ ကျမက ကလေးတွေကို ပေးဖို့ broucher ရိုက်ဖို့၊ name Card ဝယ်ဖို့၊ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းအတွက် Handout ရိုက်ဖို့၊ Pocket Dictionary လေးတွေဝယ်ဖို့၊ ပြိုင်ပွဲ နဲ့ Group Game တွေမှာ ဆုပေးဖို့၊ အခမဲ့ဆေးခန်းအတွက် ဆေးဝယ်ဖို့ နဲ့ ခရီးစရိတ်တွေ ကုန်မှာပေါ့.. လေ..။
တစ်ကယ်တော့ တက်ချင်တဲ့ကလေးတွေက တအားများတယ်.. ဆိုဘဲ..။ ကလေး ၅၀ဝ လောက်လက်ခံချင်တာပါ.. တဲ့ ..။ ဒါပေမဲ့ ပထမဆုံးစ, လုပ်တာမို့ ကလေး ၃၀ဝ ဘဲ လက်ခံမယ်.. လို့ပြောပါတယ်..။ ဒါကြောင့် ..
Pocket Dictionary ၁၂၀ဝ × အုပ်ရေ ၃၀ဝ = ၃၆၀၀၀ဝ ကျပ်
ဆေးဝယ်ရန် = ကျပ် ၂၀၀၀၀ဝ ခန့်
(ကျမတို့ အဖွဲ့ ရဲ့ ဆေးအိတ်က အိတ်ကြီး ၄-၅ အိတ် အမြဲရှိပါတယ်..။ ကုန်တဲ့ဆေး၊ နည်းနေတဲ့ဆေးတွေကို ပြန်ဖြည့်ပြီး အမြဲ ဝယ်ထည့်ရပါတယ်..။ ဒီတစ်ခါ ကျုံကဒွန်းရွာမှာ ဆေးတွေ တော်တော်များများ ကုန်သွား တာမို့ အများကြီး ပြန်ဖြည့်ရမှာမို့ပါ..)
စာအုပ်ရိုက်ရန် နှင့် ဆုဝယ်ရန် = ကျပ် ၃၀၀၀၀ဝ ခန့် နဲ့
ခရီးစားရိတ်က = ကျပ် ၆၇၂၀၀ဝ ကျမှာပါ (အသွား ၅၆၀၀ဝ ကျပ် × အသွားအပြန် ၂ ကြောင်း = ၁၁၂၀၀ဝ × ၆ ဦး)
စုစုပေါင်း ဒီခရီးစဉ်အတွက် ၁၅ သိန်း လောက်ကုန်မယ်.. လို့မှန်းထားပါတယ်..။
ကျမတို့သွားရင် အနဲဆုံး ဆရာဝန် နှစ်ယောက် လိုပါတယ်..။ အခမဲ့ဆေးခန်းက တစ်နေကုန် ဖွင့်ပေးမှာလေ..။ ပြီးတော့ ကလေး ၃၀ဝ ကို ကျန်းမာရေးစစ်ပေးဖို့လဲ ရှိသေးတာ..။ ပြီးတော့ ကျမ စာသင်ရာမှာ တွဲသင်မဲ့သူ၊ ကူမဲ့သူ အနဲဆုံး ၃ ယောက်လောက် လိုပါတယ်..။ အောက်ထစ် စုစုပေါင်း ၅ယောက်၊ ၆ ယောက် လောက်မှ မပါရင် ဆေးခန်းရော၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်တန်း ရော၊ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းရော၊ ကလေး ၃၀ဝ ကို မနက် ရ နာရီကနေ ည ၉ နာရီထိ .. ထိန်းဖို့ရာ.. အတော် ပင်ပန်းမှာပါ..။
ကျမရဲ့ Volunteer တွေကလဲ ဝန်ထမ်းတွေ၊ ကျောင်းသား/သူတွေ မို့ ခရီးစရိတ် သိန်းဂဏန်း မတတ်နိုင်ကြသလို..၊ ကျမကလဲ.. အားလုံးကို စိုက်ဖို့ မတတ်နိုင်လို့..
စိတ်ဝင်စားကြသူ .. လှူချင်ကြသူ.. ကူချင်ကြသူ .. အလှူရှင်များ 2000.donation.group@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်ပါရှင်..။
လိုအပ်သူတိုင်းကို ပေးလှူနိုင်သောသူ ဖြစ်ရပါလို၏ …. …။
If you cannot feed all, just feed one! (Mother Theresa)
P.S – ကျမရဲ့ notes များကို.. Share လိုပါက ခွင့်တောင်းရန် မလိုပါ.. Share နိုင်ပါသည်.. ရှင်….။
Dear Readers and MG villagers, Actual trip to Myeik , you can read in —-
2000 on MG ( B –3)ပွင့်သောပန်းတိုင်းလန်းစေချင် (၂၉) by May Aye Oo Swal Taw Ywet
Posted by Swal Taw Ywet on Mar 30, 2012 in Ideas & Plans |2comments
2000 team arrived on time when DASSK there.
2000 Group Team at Myeik ( March 24 - 27 , 2012 )
Children Camp No 42, Myeik ( March 25 - 27, 2012 )
Children Camp No 42 , Myeik ( March 25-27 , 2012 )
2000 Group did more than they thought/ prepared.
Please support such kinds of good deeds as much as you can.
Thanks you so much for your supporting, distributing of this info.
ကူးယူပီး Forward လုပ်ခွင့်ပြူပါ ….
Dear Char Too Lan,
Yes, you can copy and forward this.
But, If you really interested to support poor people,
Please join 2000 Group by Face book.
It will be better to get info and easy share / distribute to your friends also.
They need our/ your helps.
Thanks you so much for your willing to share.